२०७७ साउन १७ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
तीनजना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, मजदूरसहित ४६ जना सङ्क्रमित
राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १६ साउन/ वीरगंजमा ११ महिलासहित ४६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितहरू १८ देखि ७५ वर्ष उमेरका छन्। केही सङ्क्रमित बारा र रौतहटका बासिन्दा भए तापनि उनीहरू वीरगंजकै विभिन्न वडामा बसोबास गर्छन्। सङ्क्रमितहरूमा नारायणी अस्प्तालका दुईजना अर्थोपेडिक चिकित्सक र एकजना बाहिरका चिकित्सक गरी तीनजना चिकित्सकमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। नारायणीका ४० र ४४ वर्षका पुरुष अर्थाेपेडिक चिकित्सक र वीरगंजकै एकजना ३६ वर्षीय चिकित्सक सङ्क्रमित भएका हुन्। त्यसैगरी, नारायणी र एडभान्स अस्पतालका गरी ६ जना स्टाफ नर्स पनि सङ्क्रमित भएका छन्। वीरगंजका विभिन्न वडामा गरिएको मास ट्रेसिङमा पनि सर्वसाधारण बासिन्दामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा मदन उपाध्यायले बताए। नारायणीको मेडिकल वार्डमा खट्ने ४० वर्षकी स्टाफ नर्स, आइसियू कक्षमा खट्ने २० र २४ वर्षका स्टाफ नर्समा कोरोना पुष्टि भएको छ भने नारायणी अस्पतालमैं डायलोसिस गराउन आउने पर्सा पोखरिया नपा–१ की ७५ वर्षीया महिला, बारा, निजगढका ६५ वर्षीय पुरुष र बारा जीतपुरका २४ वर्षीया महिला
सङ्क्रमित तीनजनाको एकै दिन मृत्यु
प्रस, वीरगंज, १६ साउन/ वीरगंजमा एकै दिन तीनजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। बिहीवार नारायणी अस्थायी गण्डक कोभिड अस्पतालमा दुईजना र वीरगंज–२ छपकैयामा एकजना गरी तीनजनाको मृत्यु भएको हो। वीरगंज–१६ नगवा निवासी ३५ वर्षीय युवकको साँझ पौने ५ बजे र भारतीय नागरिक जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सिइओको राति ११ बजे मृत्यु भएको हो। मृतकमध्ये नगवा निवासी युवकलाई निमोनिया थियो। साउन १३ गते उनको स्वाब सङ्कलन गरिएको र रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो। एक सातादेखि ती युवकलाई ज्वरो आउने लक्षण देखिएपछि विभिन्न क्लिनिकमा उपचार गराइएको र तराई अस्पतालबाट साउन १३ गते गण्डक कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। यसैगरी, जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सिइओ भारतीय नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ। उनी दीर्घ मुटुरोगी रहेको बुझिएको छ। हालै उनमा सङ्क्रमण देखिएपछि गण्डक अस्पतालमा भर्ना गरिएको र अवस्था बिग्रिएपछि आइसियूमा राखिएको थियो। उनको राति ११ बजे मृत्यु भएको हो। अर्का सङ्क्रमित वीरगंज–२ छपकैया निवासी द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालका सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन्। वीरगंज–८ पानीटङ्की निवासी उनी पछिल्लो समय वीरगंज–२ छपकैयामा बस्
वीरगंज हेल्थकेयरलाई कोभिड अस्पताल बनाउन सिफारिश
प्रस, परवानीपुर, १६ साउन/ वीरगंज हेल्थकेयर अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पताल बनाउन कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति, पर्साले सिफारिश गरेको छ। पछिल्लो चरणमा वीरगंजमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको र वीरगंज महानगरद्वारा स्थापित नारायणी अस्थायी गण्डक कोभिड अस्पतालको आइसोलेशन कक्ष सङ्क्रमितले भरिभराउ भएपछि वीरगंज हेल्थकेयर अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउन समितिले सिफारिश गरेको हो। वीरगंज हेल्थकेयरले अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउन स्वीकृति प्रदान गरेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिका सदस्य सचिव सहायक प्रजिअ ललित बस्नेतले अस्पतालबाट कोभिड बनाउन स्वीकृति प्राप्त भएपछि समितिले अनुमोदनको लागि बिहीवार नै निर्णय गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको बताए। वीरगंज हेल्थकेयर औपचारिकरूपमा सय शय्याको अस्पताल हो। हाल आठवटा भेन्टिलेटरसहित ३२ शय्याको कक्ष छ।
सङ्क्रमितको ३६ घण्टापछि अन्तिम संस्कार
राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १६ साउन/ वीरगंजमा मृत्यु भएका दुईजना सङ्क्रमितको अन्तिम संस्कार ३६ घण्टा बिते पनि हुन सकेको थिएन। बिहीवार साँझ ६ बजेसम्म पनि दुईजना सङ्क्रमितका शव अन्त्येष्टि हुन नसकेको नारायणी गण्डक कोभिड अस्पतालका चिकित्सक डा नीरजकुमार सिंहले जानकारी गराएका छन्। वीरगंज–५ रोशमकोठीका ६८ वर्षीय र वीरगंज–६ माईस्थानका ७० वर्षीय सङ्क्रमितहरूको शव दाहसंस्कार हुन सकेको छैन। बुधवार बिहान पौने ११ बजे ६८ वर्षीय वृद्धको गण्डक कोभिड अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने पिसिआर रिपोर्ट अभावमा माईस्थानका ७० वर्षीय वृद्धको शङ्कास्पद अवस्थामा नेशनल मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा बुधवार बिहान ३ बजे मृत्यु भएको थियो। उनको पिसिआर रिपोर्ट गत आइतवार बिहान ११ बजे सङ्कलन गरी बुधवार साँझ ६ बजे आएको थियो। पर्साकी प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्तले दुवै शवको बिहीवार राति अन्तिम संस्कार गरिएको जानकारी गराइन्।
निषेधाज्ञा लगाएर पिसिआर परीक्षणको माग
प्रस, जीतपुर, १६ साउन/ जीतपुरसिमरा सार्वजनिक सरोकार समितिले निषेधाज्ञा जारी गरेर एक घर–एक व्यक्ति पिसिआर परीक्षणको माग गरेको छ। समितिको शुक्रवार सिमरामा सम्पन्न बैठकले नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग निषेधाज्ञा जारी गरेर एक घर–एक व्यक्ति पिसिआर परीक्षण गर्न माग गरेको हो। बैठकले बारा जिल्लामा रहेका उद्योगहरूले कोरोना परीक्षणविना भारतबाट मजदूर ल्याएर उद्योग सञ्चालन गरेको, पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा भएको अवस्थामा त्यहाँका नागरिक बाराको बजार, बैंक र वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्न आउँदा बारामा पनि कोरोना सङ्क्रमण फैलने सम्भावना रहेकोले पिसिआर परीक्षणको माग गरिएको समितिका संयोजक मनोज पौडेलले बताए। बैठकले बारा जिल्लामा आइसियू र भेन्टिलेटरसहितको अस्पताल नभएको अवस्थामा सिमरा, पथलैयामा आइसियूसहित सुविधासम्पन्न कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको लागि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको संयोजक पौडेलले बताए। संयोजक पौडेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा छविलाल शर्मा, कर्ण थापा, नारायण घिमिरे, राजु गिरी, रमेश सापकोटा, पेसल मुल्मी, विदुर खड्कालगायतको सहभागिता थियो।
नगरप्रमुख सरावगीमा कोरोना सङ्क्रमण
प्रस, वीरगंज, १६ साउन/ वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीलाई कोरोना सङ्क्रमण भेटिएको छ। वीरगंज महानगरपालिकामा एक घर–एक व्यक्ति परीक्षणका लागि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन तथा त्यसका लागि आवश्यक सहयोग माग्न आइतवार काठमाडौं गएका नगरप्रमुख सरावगीमा बिहीवार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। नगरप्रमुख सरावगीले सामाजिक सञ्जालमा सो कुराको पुष्टि गरेका छन्। वीरगंज महानगरमा साउन १० गते शनिवारदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको र आइतवारदेखि एक घर–एक व्यक्ति स्वाब नमूना सङ्कलन अभियान शुरू गरेर काठमाडौं गएका उनी बाटैमा अस्वस्थ भएका र काठमाडौंमा उपचार गराइ पिसिआर परीक्षण गराउँदा उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो। अहिले नगरप्रमुख सरावगी काठमाडौंमैं उपचाररत छन्।
सङ्क्रमितले बच्चा जन्माइन्
प्रस, वीरगंज, १६ साउन/ गण्डक कोभिड अस्पतालमा शुक्रवार बिहान सङ्क्रमित गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माएकी छन्। बिहीवार साँझ कोरोना पुष्टि भएपछि वीरगंज–१ छपकैया निवासी महिलालाई नेशनल मेडिकल कलेजबाट गण्डक कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। शुक्रवार बिहान उनले बालिकालाई जन्म दिएकी र दुवैको अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकले बताएका छन्।
किसानद्वारा विषादीमुक्त खाद्यान्न उत्पादन र उपभोग
प्रस, सेढवा १६ साउन/ किसानहरू वर्षेबाली धानखेतीबाट बढीभन्दा बढी उत्पादनका लागि जे गर्न पनि पछि पर्दैनन्। उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बीउ, मल तथा विभिन्न किसिमका कीटनाशक औषधि प्रयोगमा ल्याउँछन्। यसका लागि तीनै तहका सरकारले समेत किसानहरूलाई बीउ तथा कीटनाशक औषधि सहुलियत दरमा वा निश्शुल्क वितरण गर्ने गरेका छन्। सरकारी सेवाबाट वञ्चित किसानहरूले भने यी कृषिजन्य सामग्री खरीद गर्न हजारौं रुपैयाँ खर्च पनि गर्छन्। यसरी किसानहरूले विषादीयुक्त खाद्यान्न उत्पादन गरी उपभोग गर्ने र अरू उपभोक्तालाई पनि खाद्य पदार्थ सेवन गर्न विवश पारिरहेका छन्। तर पर्सामैं एउटा यस्तो स्थान छ, जहाँका किसानहरूले धानबालीमा कुनै प्रकारका विषादी र अन्य कुनै कृषिजन्य औषधि प्रयोग गर्दैनन्। त्यो हो, ठोरी गाउँँपालिका–५ सुवर्णपुर। यहाँका किसानले कुनै किसिमको कीटनाशक औषधि तथा बाली सपार्न कुनै किसिमको एन्जाइम, केमिकल प्रयोग नगर्ने गरेको स्थानीय किसान बलिराम कर्माेचाले बताएका छन्। कर्माेचाका अनुसार सो क्षेत्रको करीब चार सय बिघा धानखेती गर्ने किसानले विषादीरहित बाली उत्पादन गर्छन्। सुवर्णपुरका किसानले उत्पादन ग
कमसल भन्दै १५ जनाले राहत फिर्ता गरे
प्रस, पंचगावाँ, १६ साउन/ सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–१ मधुवन मथवलमा तेस्रो चरणको राहत वितरण गर्दा शुक्रवार १५ जनाले राहत फिर्ता गरेका छन्। राधा पौडेल, पाना देवी, सुनैना देवी, सोना देवी माझीलगायत १५ जनाले राहत फिर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले राहत सामग्री कमसल भएको भन्दै फिर्ता गरेको बताए। वडा कार्यालयमा तेस्रो चरणको राहतको लागि गापाले असारमा ७२९ घरपरिवारको लागि चामल, दाल, तेल, सोयाबिन पठाएको थियो। तर राहत सूचीमा १५३३ जनाको नाम रहेको र राहत ७२९ जनाको लागि मात्र भएपछि वडा कार्यालयले वितरण नगरी थन्काएको थियो। आज सोही राहतलाई आधा पारेर १५३३ जनामा वितरण गर्न खोजिएको वडाध्यक्ष विश्वराज पटवारी थारूले बताए। उनले वडा कार्यालयमा राहत रहँदा खराब हुने सम्भावना भएकोले आधा पारेर वितरण गरिएको बताए। राहत फिर्ता गर्नेहरूले राहत सामग्री कमसल भएको आरोप लगाएपछि वडा कार्यालयमा एक महीनासम्म थन्केको र सो समयमा वर्षा भएकोले खाद्यान्न सामग्री ओसिएर बिग्रिन सक्ने बताए।
सर्पदंशबाट एकजना घाइते
प्रस, सेढवा, १६ साउन/ जीराभवानी गाउँपालिका–२ मा सर्पदंशबाट एकजना घाइते भएका छन्। स्थानीय दशरथदास थारूलाई बिहीवार बिहान ५ः३० बजे सर्पले टोकेको थियो। घरमा सुतिरहेको बेला झ्यालबाट सर्प पसेर टोकेको परिवारका सदस्यले बताए। उनलाई उपचारको लागि सर्पदंश उपचार केन्द्र निर्मलबस्तीमा लगिएको थियो। थारूको बायाँ हातको औंलामा सर्पले टोकेको थियो। परिवारका सदस्यहरूले सर्पको पहिचान गर्दै करैत भएको बताए। वर्षाको कारण करैत सर्प झ्यालबाट घरमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ।
ग्रीनसिटीको औषधि सेवा जारी
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ लकडाउन शुरू भएदेखि वीरगंजलगायत पर्सा जिल्लाका बिरामीहरूलाई भारतबाट आवश्यक औषधिहरूको जोहो गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि सेवा बन्द गरेको छ। सानो पाइलासँगको सहकार्यमा जिप्रका, पर्साले लकडाउन अवधिभरि सेवा प्रवाह गरेको थियो। लकडाउनको अवधिमा जिल्ला प्रहरीपछि सेवा शुरू गरेको आदर्शनगर ग्रीनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले भने यो सेवालाई अहिले पनि निरन्तरता दिंदैछ। निषेधाज्ञा जारी हुनुअगावैसम्म भारत, बिहारमा लकडाउन भएको कारण आम मानिसको आवतजावत नभएकोले ग्रीनसिटीले सेवा जारी राखेको थियो। अहिले पनि यो सेवा जारी रहेको ग्रीनसिटीका अध्यक्ष प्रकाश खेतानले बताए। उनले लकडाउन हटेपछि जिप्रका पर्साले उक्त सेवा बन्द गरेपछि यहाँ रहेका थुप्रै मानिसलाई भारतबाट औषधि नआउँदा समस्या झेल्नुपरेको हुँदा सेवा सुचारुको विकल्प नदेखिएको बताए। निषेधाज्ञा अगाडि दैनिक पचासजना मानिस पर्सा जिल्लाभरिबाट औषधिको लागि आउने गरेको र अहिले निषेधाज्ञाको बेलामा पनि ५–६ जना दैनिक औषधि लिन आइरहेको बताए। उनले मोबाइल फोन, वाट्सएप
चौपायासहित ट्रक र चालक भन्सार चलान
प्रस, रौतहट, १६ साउन/ १९ लाख ५० हजार मूल्यबराबरको भन्सारी छलिका चौपाया जनावरसहित ट्रक र चालकलाई भन्सार चलान गरिएको छ। भैंसी, पाडा, पाडी र ट्रकसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको लागि भन्सार चलान गरिएको हो। प्रहरी गस्ती टोलीले गस्ती गर्दै जाने क्रममा बौधीमाई नगरपालिका वडा नं ८ हनुमान मन्दिरनजीक पुग्दा दक्षिण बङ्कुलबाट उत्तर मौलापुरतर्फ जाँदै गरेको ना.४ख ४०५२ नंको ट्रकलाई रोकी चेकजाँच गर्दा उक्त ट्रकमा भैंसी, पाडा, पाडी रहेकाले पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। सो ट्रकको चालक जिल्ला मकवानपुर थाहा नगरपालिका वडा नं ३ टिस्टुङ बस्ने ३४ वर्षीय राम महर्जनसँग सोधपूछ गर्दा भैंसी, पाडा, पाडीको खरीद बिल नभएकोले ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि बिहीवार साँझ गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको थियो। बिहीवार दिउँसो २ बजे पक्राउ परेको थियो।
रौतहटमा एकजनाको डुबेर मृत्यु
प्रस, रौतहट, १६ साउन/ गौर नगरपालिका वडा नं २ मा एकजना बालकको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। गौर नपा–२ निवासी पङ्कज भारतीका १३ वर्षीय छोरा कुणाल भारतीको डुबेर मृत्यु भएको हो। गौर नपा–२ को महादेवपट्टिसँगै जोडिएको भारतीय तटबन्धको तल्लो खाल्डोलाई तर्न खोज्दा डुबेर मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। मृतकको शव शल्य परीक्षणका लागि गौर अस्पताल पठाइएको छ।
भत्ता माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित
प्रस, पोखरिया, १६ साउन/ पोखरिया नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले जोखिम भत्ता नपाएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्। कोरोनाकालमा सङ्क्रमितहरूको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता आदेश २०७७ बमोजिम आफूहरूलाई पोखरिया नपाले भत्ता उपलब्ध नगराएको विरोधमा साउन १६ देखि २६ गतेसम्म विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। विरोधस्वरूप स्वास्थ्यकर्मीहरूले आजदेखि २१ गतेसम्म कालोपट्टि बाँधेर काम गर्ने बताए। त्यस्तै, २२ र २३ गते नगरपालिका कार्यालयमा धर्ना, ल्याब र एक्स–रे सेवा बन्द गर्ने, २४ गते युएसजी बन्द गर्ने, २५ गते सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडी सेवा बन्द गर्ने र २६ गतेदेखि आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने पोखरियाका स्वास्थ्यकर्मीले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएका छन्।
परीक्षण गर्न र आइसोलेशन बनाउन माग
प्रस, बिरुवागुठी, १६ साउन/ पर्सागढी नगरपालिका–३ का बासिन्दाहरूले पिसिआर परीक्षणको लागि वडाध्यक्षलाई दबाब दिएका छन्। बिहीवार बसेको बैठकमा वडावासीहरूले नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू आठजना सङ्क्रमित भएको भन्दै वडामा घरपिच्छे एकजनाको पिसिआर परीक्षण गराउन वडाध्यक्षलाई आग्रह गरे। उनीहरूले नगरभित्र सङ्क्रमितहरू राख्न उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। सङ्क्रमितहरूलाई राख्न वीरगंजको आइसोलेशनमा स्थान नभएको र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै छुट्टै व्यवस्थापन गर्न माग गरे। वडाध्यक्ष उद्धवबहादुर उप्रेतीले आइसोलेशन शøया बनाउन र परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउने आश्वासन दिए। अहिले सङ्क्रमितहरूलाई विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा छुट्टै राखिएको छ। उनीहरूलाई राख्ने उचित व्यवस्थापन नगरिए आन्दोलन गर्ने युवाहरूले चेतावनी दिएका छन्।
-राजेश मिश्र तीन–चार दशकअघिसम्म विदेश र हवाईजहाजको यात्रा सबैको पहँुचमा थिएन। नजीकबाट प्रत्यक्षरूपमा हवाईजहाज हेरेका आँखाहरू नगन्य थिए। पछाडि पल्टिने गरी मुन्टो उठाएर आकाशमा चराको आकारमा मात्र हवाईजहाज हेर्न पाइन्थ्यो। उतिबेला हवाईजहाज कति ठूलो हुन्छ ? कति मानिस सवार हुन्छन् ? कसरी आकाशमा उड्छ ? लगायतका प्रश्नहरूबाट आमजन अनुत्तरित थिए। पुर्खाहरूबाट सुनेका उडनतस्तरीको कथा जस्तै मनोविज्ञान थियो, वैज्ञानिकद्वारा निर्मित हवाईजहाजप्रति। आँखाबाट ओझेल नभएसम्म आकाशमा जहाज निहारेर नथाक्ने उही पिताका सन्तानहरू खेत बिक्री/बन्धक राखेर हवाईजहाजबाट उड्न बाध्य छन्। विदेशमा श्रम गर्न बाध्य छन्। पर्साको पोखरिया नगरपालिका वडा नं ६ का एैनुलहक कामको सिलसिलामा साउदी अरबमा छन्। उनले उक्त देशले गरेको कोभिडको व्यवस्थापकीय भूमिकाबारेमा अवगत गराए। यस महामारीको बेला साउदी सरकारको जनउत्तरदायी व्यवस्थापन, काम गर्ने संस्थाको उचित प्रबन्धन र मानिसहरूको स्वसतर्कताका कारण कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण हँुदै गइरहेको बताए। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा क्रमिकरूपमा हट्दै जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ। उनका अनुुुुसार
- मुकुन्द आचार्य शब्दकोश लेखन्तेहरूले अपार खुशी व्यक्त गर्दै पार्टी गरे। त्यहाँ घोषणा गरियो– हामी डिक्सनरी तयार पार्ने लेखन्तेहरूले यौटा नयाँ शब्द फेला पा–यौं। त्यो हो– ‘कोरोना’। यो पार्टी त्यै उपलक्ष्यमा हो। शब्दकोशमा यसको अर्थमा हामीले लेख्नुपर्छ– यो एकदमै नयाँ खाले रोग हो। सङ्क्रामक बिमारी हो। चाँडै सर्छ तर चाँडै छुट्दैन। लाखौंलाई सोत्तर पार्न सक्छ। मान्छेको घमण्डलाई चकनाचूर पार्न सक्छ। त्यसमा थप गर्नुपर्छ– यस सरुवा रोगलाई अलि–अलि जेनतेन रोक्ने प्रयास भएपनि निर्मूल गर्न त गा–है पर्छ। यसै क्रममा कतै लकडाउन, कतै कर्फ्यू, कतै आइसोलेशन, कतै सोसल डिस्टेन्स, कतै इम्युनिटी, कतै योग, कतै घरेलु औषधि, कतै स्वाब टेस्ट, कतै दाहसंस्कारको समस्या आदि इत्यादि थुप्रै कर्म कुकर्म हुन थाल्छन्। लोभीपापीले यस्तोमा पनि कमाउँछन्। यस बिमारीको रोकथामको क्रममा मान्छेले आफ्नो अल्पबुद्धि प्रयोग गरी शहर, गाउँ, बस्तीमा ‘कफ्र्यू’ लगाएर कोरोनाको कहरभन्दा पनि ठूलो आतङ्क फैलाउनेछन्। सकल खाद्य पदार्थको भाउ ह्वात्तै बढेर रेकर्ड कायम हुने गरी महँगी बढ्नेछ। बेच्नेले ग्राहक पाउनेछैनन् र ग्राहकल
सीता बाबाको अन्तर्वार्ता
- सञ्जय मित्र हो, गाउँभरका दौंतरीहरूले उनलाई सीता बाबा भन्दथे, अनुकरणमा म पनि त्यैं भन्दथें। बुबाले उनलाई फुफा भनेको सुनेपछि असमञ्जस रहेन। सीता बाबाको आफ्नो गाउँ कुन थियो, अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। उनी आफ्नो ससुरालीमा थिए। ससुरालीको सम्पत्ति उनकै भएको थियो भन्ने सुनेको हुँ। अलमल नहोओस्– सीता पुरुषकै नाम हो यहाँ। ससुरालीमा बसेपछि कतिपयले जिस्क्याउने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीं जिस्क्याएको वा जिस्केको पनि सुनिन्थ्यो। हामी केटाकेटीले त्यत्ति धेरै कुरा बुझ्दैनथ्यौं। सम्भवतः म सात कक्षामा पढ्दै गरेको हुनुपर्छ। २०४७ सालको संविधान आइसकेको थिएन, २०४६ को जनआन्दोलनभन्दा पनि केही पहिलेकै कुरा हो। २०४३/४४ तिरको कुरा हो यो। म १२/१३ वर्षको हुँदो हुँ। असारको पन्ध्रदेखि साउनभरि गर्मी बिदा हुन्थ्यो। विद्यालय बन्द भएपछि हामी खुशी हुन्थ्यौं। सबैभन्दा लामो छुट्टी हुन्थ्यो। हामी खूब रमाइलो मान्दथ्यौं। सीता बाबा उमेरले बूढो भइसकेका थिए। कपाल पूरै सेतो फुलिसकेको थियो। जुँगा र दा–ही धेरै बाक्लो नभए पनि सेतो फुलिसकेका थिए। अनुहार गहुँगोरो। अनुहारभरि चाउरी परिसकेको। एक्लै आफ्नो आँपक
२०७७ साउन १६ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
नारायणी प्रयोगशालामा आरएन स्ट्रक्चर मेशिन जडान अब पिसिआर रिपोर्ट चाँडै आउँछ
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा दुईवटा पिसिआर मेशिन चालू भएपनि सोबाट आशाप्रदरूपमा समयमा रिपोर्ट नपाएको गुनासो बढ्दै छ। नारायणी प्रयोगशालामा रहेको दुईवटा पिसिआर मेशिन बा–ह घण्टा सञ्चालन गर्दा एक हजार मानिसको रिपोर्ट निकाल्न सकिने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा मदन उपाध्यायले बताए पनि अहिले सोअनुरूपको रिपोर्ट आउन सकेको छैन। वीरगंज महानगरपालिकाले एक घर–एक व्यक्ति पिसिआर परीक्ष्Fण अभियान शुरू गर्दा मेसु डा उपाध्यायले नारायणी प्रयोगशालाबाट १२ घण्टामा एक हजार परीक्षण रिपोर्ट तयार हुने जानकारी गराएका थिए। अहिले यो अभियान सुस्त गतिमा छ। तर पनि दैनिक तीन सयभन्दा बढी स्वाब नमूना परीक्षण हुन सकेको छैन। हजारको सङ्ख्यामा स्वाब नमूना परीक्षण नहुनुको कारणमध्ये एक जनशक्तिको अभाव हो। लकडाउन शुरू भएर सङ्क्रमित बढेपछि प्रदेश सरकारबाट पिसिआर मेशिन प्राप्त भएको थियो। सो मेशिनको प्रयोग दैनिक तीन सिफ्टमा भयो। तीन सिफ्टमा काम गरेका प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा उपलब्ध नगराइँदा अहिले उनीहरूले दुईवटा पिसिआर मेशिन सञ्चालनमा रहे पनि एक सिफ्ट मात्रै काम गर्दै आएका छन्।
५३ जना सङ्क्रमित थपिए
राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १५ साउन/ वीरगंजमा बुधवार राति १५ महिला र ३८ पुरुष गरी कुल ५३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगंजले अबेर राति सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार ५३ जनामा कोराना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। जसमा नारायणी अस्पतालका दुई र अन्य एक गरी तीनजना चिकित्सकसमेत सङ्क्रमित भएका छन्। एक दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमणको चपेटामा परेका छन्। नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा मदन उपाध्यायका अनुसार ३ वर्षको बालकदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका विभिन्न ठाउँका सङ्क्रमित रहेका छन्। नारायणी अस्पतालका एम्बुलेन्स चालकसमेत सङ्क्रमित भएका छन्। नारायणी अस्पतालका सर्जिकल र आइसियूमा खटेका स्टाफ नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा पहिलेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको संसर्गमा आएका स्वास्थ्यकर्मीसमेत सङ्क्रमित भएका छन्। नारायणी अस्पतालको क्वाटरमा बस्ने एवं वीरगंज वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६, ८, ९, ११, १२, १६, २५ गरी विभिन्न वडाका सङ्क्रमितहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका परिवारजनका सदस्य रहेका छन्।
सर्वपक्षीय बैठकः विज्ञसहितको टोली खटाउन माग निजी अस्पताललाई आइसोलेशन बनाउन आग्रह
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ पर्सा जिल्लाका राजनीतिक दलहरूको पहलमा बिहीवार वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर कोरोना सम्बन्धमा सङ्घ सरकारलाई अविलम्ब विज्ञसहितको चिकित्सक टोली खटाउन माग गरिएको छ। सर्वपक्षीय बैठकले सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नियन्त्रणको लागि विज्ञसहितको चिकित्सक टोली तत्काल वीरगंज पठाउन सङ्घीय सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयसित आग्रह गरेको छ। बैठकले कोभिड सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्थामा शøया अभाव भएको भन्दै सरकारलाई नेशनल मेडिकल कलेज, वयोधा अस्पताल, वीरगंज हेल्थकेयरलगायत वीरगंजका निजी अस्पतालहरूमा आइसोलेशन बनाउन आग्रह गरेको छ। यसैगरी, नारायणी अस्पतालको बन्द सेवा सुचारु गर्न माग गरिएको छ। बैठकले पछिल्लो समयमा पर्सा जिल्लामा सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भएको र उनीहरूको दाहसंस्कारमा समस्या भएको हुँदा मृत्युपछि सम्मानजनक अन्त्येष्टि हुन नसक्नु दुःखद भन्दै विद्युतीय शव गृह अविलम्ब जडान गर्न माग गरेको छ। यसैगरी, विद्युतीय शव गृह जडान नहुन्जेलसम्म अन्तिम सत्य मृत्युपछिको अन्त्येष्टिमा सबैलाई मानवता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरिएको छ। बैठकले धा
सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भगवान् भरोसे
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ नारायणी अस्थायी कोभिड गण्डक अस्पतालमा क्षमताभन्दा बढी सङ्क्रमित राखिएका छन् भने सोको दुई गुणा बढी सङ्क्रमित अहिले भगवान् भरोसे अवस्थामा छन्। पछिल्लो चरणमा वीरगंजमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपछि अहिले गण्डक अस्पतालमा क्षमताभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको डा उदयनारायण सिंहले बताए। साउन १ गतेदेखि वीरगंजमा कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेको हो। असार ३१ गतेसम्म गण्डक अस्पतालमा एकजना मात्र सङ्क्रमित थिए। त्यसपछि बढ्दै गएर अहिले गण्डक अस्पतालमा ६२ जना छन् भने अस्पतालबाहिर सयभन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। गण्डक अस्पतालको क्षमता ५० शøयाको हो। त्यहाँ १० शøयाको आइसियू छ। जसमा ५ जना छन्। ५० शøयाको अस्पतालमा अहिले कुल बिरामी ६२ जना रहेको र उनीहरूलाई जसोतसो व्यवस्थापन गरिएको डा सिंहले बताए। उनले मङ्गलवार र बुधवार भेटिएका सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताएका छन्। साउन ८ गतेपछि सङ्क्रमित हुनेहरू आइसोलेशनको अभावमा सम्बन्धित क्वारेन्टाइन, कारागार, ब्यारेक, प्रहरी कार्यालय, घरमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूलाई सचेत पनि गराइएको छैन। घर र सम्बन्धित ठाउँमा आइसोले
तोकिएको कार्यस्थलमा जान नमान्ने २५ जना स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ वीरगंज महानगरले तोकेर पठाएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले कार्यक्षेत्रमा जान नमानेपछि पर्सा प्रहरीले २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ। नारायणी अस्पताल तथा कोभिड गण्डक अस्पतालमा ड्युटी गर्न महानगरले ६० जना कर्मचारीलाई खटाएको छ। पहिलो चरणमा ३० जना कर्मचारीलाई कार्यस्थल तोकी पठाउँदा कर्मचारीहरू जान नमानेपछि प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ। पक्राउ परेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूहरू तोकेको ठाउँमा जान इच्छुक रहेको तर महानगरले भत्ता सुविधा, सुरक्षा सामग्री, बीमालगायतका व्यवस्था नगरेको कारण काममा जान नमानेको बताएका छन्। विगत तीन दिनदेखि काम नगरी महानगरमा विरोध जनाउँदै आएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई महानगरको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अरुण महतोले पटक–पटक सम्झाउँदा पनि नमानेपछि आज प्रहरी लगाएर पक्राउ गराएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले जानकारी गराएका छन्। यस विषयमा प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्तले तोकिएको कार्यस्थलमा कर्मचारी जान नमानेपछि बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिइन्। नियन्त्रणमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जिप्रकामा ल्याएर सम्झाइ कार्यस्थलमा पठाउने उनले बताइन्। यसअघ
संयोगले दलित अधिकार समाजको सहयोगमा उपचार पाए
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ पर्सा जिल्ला सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–५ महुवन बस्ने २५ वर्षीय संयोग महरा चमार उपचारपछि घर फर्केका छन्। करीब २२ दिन नेशनल मेडिकल कलेजमा चमारको उपचार भएको थियो। निकै गरीब चमारको उपचारमा दलित अधिकार समाज नेपालले पहल गरी आर्थिक सहयोग जुटाएको थियो। एक महीना गाउँघरमैं बिमारीले थला परेका चमारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कलेजोमा पीप जमेको देखिएको थियो। नेशनल मेडिकल कलेजमा उनको उपचार गराइएको दलित अधिकार समाज पर्साका अध्यक्ष मनोज रामले बताए। उपचार खर्चमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट रु १ लाख ७० हजार सहयोग प्राप्त भएको र बाँकी रु २० हजार दलित अधिकार समाजले बेहोरेको अध्यक्ष रामले बताए। २२ दिनपछि छोरा फर्किंदा पिता बागड महरा चमार खुशी भएका छन्। आफ्नो आर्थिक अवस्थाले उपचार गराउन असमर्थ रहेको बेलामा समाजले पहल गरी छोराको उपचार गराइदिएकोमा उनी खुशी हुनुका साथै सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। संयोग चमार अस्पतालबाट सोमवार घर फर्केका हुन् र अहिले उनी स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्।
ग्यास सिलिन्डर वितरणमा झडप
प्रस, रौतहट, १५ साउन/ रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका वडा नं ५ मा ग्यास सिलिन्डर वितरणको क्रममा झडप हुँदा २४ जना घाइते भएका छन्। यमुनामाई गापा–५ का अध्यक्ष रहमत आलम राठीले सिलिन्डर वितरणमा भेदभाव गरेको स्थानीय रामसोगारथ साहको आरोप छ। वादविवाद झडपको रूपमा परिणत भई दुवैतर्फबाट इँटाढुङ्गा हानाहान हुँदा दुवैतर्फका २४ जना घाइते भएको स्थानीयले बताएका छन्। घाइतेमध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर भएकोले उपचारका लागि वीरगंज पठाइएको गौर अस्पतालले जनाएको छ। दुवैतर्फबाट इँटा, ढुङ्गा चलेकाले धेरैजना घाइते भएका हुन्। अन्य घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको स्थानीयले बताएका छन्। फतुवाका बासिन्दालाई ग्यास सिलिन्डर दिने क्रममा झुन्खुन्वा निवासीलाई ग्यास नदिने वडाध्यक्षले अडान राखेपछि विवाद हुँदै झडपमा परिणत भएको स्थानीय भोला माझीले बताए। लक्षित समुदायलाई नदिई आफ्ना नजीककालाई वडाध्यक्षले ग्यास सिलिन्डर दिएको, ग्यास माग्दा दलित, पासवान, माझी र मुसहर परिवारका सदस्यलाई वडाध्यक्षले कुटपीट गराइ घाइते बनाएको घाइतेमध्येका विक्की यादवले बताएका छन्। दलित, एकल महिला, विपन्न वर्गलाई ग्यास दिनुपर्नेमा सो नभएको पा
गरीब, मजदूरलाई राहत वितरण
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ डिग्निटी फोरम अस्टे«लियाका अध्यक्ष डा मोम विश्वकर्माले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोगबाट दलित अधिकार मञ्च पर्सा र पिस फोर दलित फाउन्डेशन नेपालले वीरगंज महानगर–१८ विन्दवासिनीको केहुनियामा दलित, गरीब, मजदूरहरूलाई राहत वितरण गरेका छन्। लामो समयको लकडाउन र पर्सा जिल्लाको वीरगंज महानगरपालिकामा जारी निषेधाज्ञा अवधिमा गरीब, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने २५ दलित, गरीब, मजदूर परिवारलाई ११ किलो चामल, १ किलो नून, डेढ किलो आलु, १ किलो दाल र १ लिटर खानेतेल वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा दलित अधिकार समाज पर्साका अध्यक्ष मनोज रामले सहजीकरण गरेका थिए भने अशोक राम, दीपेन्द्रकुमार रामलगायतले सहयोग पु–याएका थिए।
चिनीमिल सञ्चालनको लागि उखु किसानले बुझाए ज्ञापनपत्र
प्रस, गरुडा, १५ साउन/ रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स लि.लाई साउन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी उद्योग व्यवस्थापनले स्थायीरूपमा बन्द गरिएको सूचना जारी गरेपछि जिल्लाका उखु किसानहरूले उद्योग पुनः सञ्चालनको लागि पहल शुरू गरेका छन्। उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटले गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख इन्नुराय यादवलाई उद्योग सञ्चालनको लागि पहल गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सङ्घका सचिव सफिन्द्रप्रसाद यादवको नेतृत्वमा नगरपालिका गएको टोलीले नगरप्रमुख यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्रमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उद्योग बन्द भएको तथा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सबैभन्दा बढी किसानले सहयोग गर्दै आएको बताइएको छ। ६ वर्ष पहिले उखु किसानहरूले उद्योगलाई बेचेको उखुको मूल्य अझै पनि पाउन बाँकी रहेको र गत चैत मसान्तसम्ममा उद्योगले सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने सम्झौता गरेको भएपनि करीब ४१ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ। जिल्लामा अझै पनि करीब १२ हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखुखेती हुँदै आएको बताउँदै सचिव यादवले उखु किसानले कुनै पनि हालतमा उद्योग बन्द नहोओस् भ
प्रहरी चौकीको नयाँ भवनको शिलान्यास
प्रस, रौतहट, १५ साउन/ यमुनामाई गाउँपालिकामा प्रहरी चौकीको नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्काले भवनको शिलान्यास गरेका हुन्। यमुनामाई गापाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखियाको अध्यक्षतामा सुकदेव चोकमा रहेको प्रहरी चोकी भवन शिलान्यास भएको हो। करीब ९४ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो भवनको लागि तीनवटा स्थानीय तहले सहयोग गरिरहेका छन्। माधवनारायण नगरपालिकाले १५ लाख, देवाही गोनाही नगरपालिकाले १० लाख, परोहा नगरपालिकाले ५ लाख र बाँकी यमुनामाई गाउँपालिकाले भवन निर्माणमा लाग्ने खर्च बेहोर्ने भएका छन्। स्थानीय व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस अवसरमा यमुनामाई गापाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखिया, माधवनारायण नपाका प्रमुख वीरेन्द्र यादव, उपप्रमुख सिमलकुमारी साह, वडाध्यक्ष राजकुमार यादव, नन्दलाल यादवलगायतको सहभागिता थियो। प्रहरी चौकीको पुरानो भवन जीर्ण बन्दै गएपछि नयाँ भवन निर्माण हुन लागेको हो। प्रउ खड्काको विशेष पहलमा नयाँ भवन निर्माण हुन लागेको हो।
चार हजार नागरिकता वितरण
प्रस, जीतपुर, १५ साउन/ इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा बाराले एक वर्षमा ४ हजार नागरिकता वितरण गरेको छ भने १ हजार राहदानी सिफारिश गरेको छ। इप्रका सिमरा बाराका प्रमुख उपसचिव लक्ष्मण ढकालले आव २०७६/०७७ मा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाका सर्वसाधारणलाई नागरिकता तथा राहदानी वितरण गरिएको जनाएका छन्। एक वर्षमा २६९२ थान नयाँ नागरिकता, ६० थान वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, ११५९ थान प्रतिलिपि नागरिकता र ९७२ थान राहदानीको लागि काठमाडौं सिफारिश गरिएको प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ।
प्रस, पोखरिया, १५ साउन/ लकडाउनअगावै बन्द भएको विद्यालयमा आज कार्यक्रमको आयोजना गरी पुस्तकालयको उद्घाटन र विद्यार्थीहरूलाई पोशाक, ब्याग वितरण गरिएको छ। कालिकामाई गाउँपालिका–४ परशुरामपुरस्थित नेरा आधारभूत विद्यालयमा आइसिटी ल्याब र पुस्तकालयको उद्घाटन गापा अध्यक्ष नथुनी कुशवाहा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु साहले गरेका थिए। सोही अवसरमा विद्यालयमा बाल विकासदेखि कक्षा ९ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पोशाक, ब्याग, जुत्ता, मोजा वितरण गरिएको थियो। वडा नं ४ परशुरामपुरको कटी टोलमा रहेको यो विद्यालय गापाकै नमूना विद्यालय हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले गापाको सबैभन्दा नमूना विद्यालयमा आइसिटी ल्याब तथा पुस्तकालय स्थापना गरिएको बताए। कार्यक्रममा कार्यवाहक वडाध्यक्ष छोटेलाल चौरसिया, प्रअ इन्द्रदेवप्रसाद कुर्मी, वकील मियाँलगायतको सहभागिता थियो।
करेन्ट लाग्दा एक महिलासहित दुईवटा साढेको मृत्यु
प्रस, रौतहट, १५ साउन/ सदरमुकाम गौरमा ३३ हजार केभिएको तार चुँडिएर करेन्ट लाग्दा एक महिलासहित दुईवटा साढेको मृत्यु भएको छ। करेन्ट लागेर गौर नपा–४ की ७० वर्षीया शान्ति देवीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। बिहान चिया पिउन पसलमा गएकी वृद्धा बाटो काट्ने क्रममा करेन्टको चपेटामा परेकी थिइन्। सोही स्थानमा करेन्ट लागेर दुई चौपाया साढेको समेत ज्यान गएको छ। गौर–चन्द्रपुर जोडने मुख्य सडकनजीकै उच्च भोल्टेजको करेन्ट प्रवाह भइरहेको तार चँुडिएर सडकमा खसेपछि स्थानीयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गौर शाखामा जानकारी गराएका थिए।
डुबेर एकजनाको मृत्यु
प्रस, जनकपुरधाम, १५ साउन/ सिराहा जिल्लाको सिराहा नगरपालिका वडा नं १० स्थित कल्भर्टमा डुबेर बिहीवार बिहान एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही वडा निवासी वर्ष ५० का झगरू मुखिया रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पदमपुरबाट नरैया जाने भित्री सडकखण्डको कल्भर्टमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा मुखियाको शव फेला परेको हो। बिहानै कल्भर्टमा शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। मुखिया कसरी कल्भर्टमा डुबे भन्नेबारे यकीन नभएकोले घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। शवलाई परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल पु–याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।
३५ जनाको स्वाब सङ्कलन
प्रस, परवानीपुर, १५ साउन/ वीरगंज महानगरपालिका–२१ लिपनीबिर्तामा बिहीवार ३५ जनाको स्वाब सङ्कलन भएको छ। महानगरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीले बुधवार दिउँसो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परवानीपुरको भवनमा महिला र पुरुष गरी ३५ जनाको स्वाब सङ्कलन गरेको हो। वीरगंज–२१ परवानीपुरकी १७ वर्षीया किशोरीको ५ दिन पहिले अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डकमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका ३५ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको स्थानीय अलि अख्तर अन्सारीले जानकारी गराए। सो क्रममा वीरगंज–२१ का अध्यक्ष हबिब मियाँले सहजीकरण गरेका थिए।
सशस्त्र प्रहरीले मोटरसाइकलको पाटर्स बेचेको आरोप
प्रस, सिम्रौनगढ, १५ साउन/ सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको मोटरसाइकलका पाट्र्सहरू बजारमा बिक्री भएको पाइएको छ। विभिन्न समयमा सशस्त्र प्रहरी गोपालगंजले बरामद गरेका मोटरसाइकलहरू आवश्यक कारबाईको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुको साटो त्यसका पाट्र्सहरू बजारमा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। सम्बन्धित धनीको मोटरसाइकलका पार्टस् सिम्रौनगढ बजारको कङ्काली पुलनजीक बिक्री भएको र त्यसबारेमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कबीर मल्लसँग स्थानीयले सोधखोज गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीले मोटरसाइकलका पाट्र्सहरू बिक्री गरेको सम्बन्धमा स्थानीयले प्रमाण फेला पारेपछि सप्रनि मल्लसँग यसबारेमा विवाद गरेका हुन्। स्थानीयले सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न कारणबाट नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेमा सो नगरी त्यसका पाट्र्सहरू बिक्री गर्ने गरेको बताए। यस सम्बन्धमा सप्रनि मल्लले भने यस्तो कार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
निश्शुल्क आक्सिजन सेवा शुरू
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ मारवाडी सेवा ट्रस्टले वीरगंजमा निश्शुल्क आक्सिजन सेवा शुरू गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमितहरूका लागि निश्शुल्क आक्सिजन सेवा शुरू गरिएको रामबाबू यादवले बताए। राणीसती अतिथि सदनमा बुधवार रातिदेखि निश्शुल्क आक्सिजन सेवा ट्रस्टले सञ्चालनमा ल्याएको उनले जानकारी गराएका छन्। कोरोना सङ्क्रमितलाई चिकित्सकको सल्लाहमा निश्शुल्क आक्सिजन व्यवस्था गरिने उनले बताए। आक्सिजनको लागि चिनजानका मानिस अथवा आफ्नो परिचय खुल्ने कार्डको आधारमा पनि आक्सिजन उपलब्ध गराइने उनले जानकारी गराएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा सङ्क्रमितहरूलाई आक्सिजनको अत्यावश्यक हुने र सोको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने असमर्थहरूको लागि निश्शुल्क आक्सिजनको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी गराएका छन्। यादवले राणीसती अतिथि सदनबाट यो सेवा सङ्क्रमितहरूले लिन मोबाइल नं ९८४५०६०५६८ मा चौबीसैं घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने बताए।
प्रस, जनकपुरधाम, १५ साउन/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले लागूऔषधसहित लालबन्दीबाट एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा झापा स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको जोरपाटी–१ बस्दै आएका १९ वर्षीय सुनील सन्थाली रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको साथबाट १९६ थान प्रतिबन्धित नाइट्रोभेट ट्याब्लेट बरामद भएको जिप्रका सर्लाहीले जनाएको छ। बिहीवार बिहान लालबन्दी नगरपालिका वडा नं १ बागवानीनजीक शङ्कास्पदरूपमा पैदल हिंडिरहेका उनीमाथि शङ्का लागि प्रहरीले चेक गर्दा उनको साथबाट लागूऔषध बरामद भएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता मदन कुँवरले जानकारी दिए।
चारैतिर भताभुङ्ग छ
राजनीतिकरूपले देश पहिले नै भताभुङ्ग थियो। न सत्ताधारीलाई देशको चिन्ता न प्रतिपक्षीलाई। सबैको अभीष्ट सत्ता। त्यसैले नेताहरूको सम्पूर्ण ध्यान सत्ता पाउन, त्यसलाई जोगाउनमैं सीमित रह्यो। आज कोरोना महामारीको त्रासले विश्व त्रस्त छ, नेपालसमेत अछूतो छैन। नेपालमा अहिले चारैतिर कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ज्यामितीय गतिमा बढिरहेको छ, तर के केन्द्रीय सरकार, के प्रदेश सरकारहरू र के स्थानीय प्रशासन र सरकारहरू सबैको ध्यान महामारीको व्यवस्थापनमा होइन, कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित छ। केन्द्र सरकार कुर्सीको लडाइँमा रणकौशल देखाउँदै छ, प्रदेश सरकारहरू आफ्नै मपाइँमा मग्न छन्। स्थानीयस्तरमा प्रशासन र स्थानीय सरकारहरू को ठूलो, को सक्ष्Fम भन्ने अहम् पुष्टिमा लागेका छन्। कोरोनासँग एक्लै कोही लड्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर अहम्ले सबैलाई एकजुट हुन दिइरहेको छैन। नागरिक महामारीले पीडित त थियो नै, निषेधाज्ञाले झन् प्रताडित बनेको छ। मानिस धमाधम मरिरहेका छन्। सद्दे मानिसमा सङ्क्रमणको वृद्धि पानीमा तेलझैं विस्तार भइरहेको छ। न स्थानीय तह, न प्रशासन नै बिरामीको गति बढेसँगै उपचारको मात्रा वृद्धि ग
-विश्वराज अधिकारी आर्थिक विकासको इतिहासले भन्छ– धनको सम्बन्ध भौतिक वस्तु (जग्गा, सुन, चाँदी, नगद आदि)सँग होइन व्यक्तिमा निहित ज्ञानसँग हुन्छ। समाजको चेतनाको स्तरसँग हुन्छ। धनले धन सृजना गर्ने होइन, ज्ञानले धन सृजना गर्छ। तर यो यथार्थलाई पूर्वीयहरूले आत्मसात् गरेनन्। जहिले पनि धनको वृद्धि धनबाट हुने भ्रमको पछि दौडे, समय बर्बाद गरे, तर ज्ञानद्वारा धनको वृद्धि गर्नेतिर लागेनन्। यसको ठीकविपरीत पश्चिमाहरूले धनको सम्बन्ध ज्ञान (बुद्धि, चातुर्य, जोखिम वहन क्षमता, नयाँ विचारको खोज आदि)सँग रहेको तथ्यलाई बुझे, त्यसमा दृढतापूर्वक विश्वास गरे, त्यो अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याए। परिणाम, पश्चिमा (युरोप, अमेरिका)हरू अहिले धनी छन् तर पूर्वीय (पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मा, नेपाल, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स आदि)हरू गरीब छन्। केही त गरीबीको रेखाभन्दा मुनि छन्। पूर्वीयहरूसँग अनेक किसिमका स्रोत र साधन नभएको होइन। तर पूर्वीयहरूले ती स्रोत र साधनको प्रयोगमा ठूलो आर्थिक लाभ रहेको देखेनन्। उदाहरणका लागि पूर्वीयहरूले पहाडलाई आर्थिक विकासको बाधक माने, आफ्नो देशको विकास हुन नसकेको कारणको रूपमा पहाडी भ
बढ्दो आर्थिक अनियमितता समृद्धिको बाधक
-शीतल महतो नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को अवधारणा अघि सारेको छ। यसका लागि मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासन दुुवै चाहिन्छ। अहिले कर्मचारीप्रति जनताको सकारात्मक भावना छैन। आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँजसो कुनै न कुनै कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। कतिपय त रङ्गेहात पक्राउ परेका छन्। यसले गर्दा हामीकहाँ सुशासन पटक्कै छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। यसले ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिनेछैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले सरकार अब भ्रष्टाचार र सुशासन विरोधी गतिविधिका लागि आक्रामकरूपमा उपस्थित हुन जरुरी छ। अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बढी गम्भीर हुनैपर्छ र दोषीलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउनैपर्छ। अन्यथा समृद्धिको यात्रा त्यति सहज हुनेछैन। सरकारले पटक–पटक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उद्घोष गरे पनि व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ। निजामती वा अन्य सरकारी कर्मचारीसहित सरकार सम्बद्धहरूबाट र
२०७७ साउन १५ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
निषेधाज्ञा जारी गरेर पनि स्वाब सङ्कलन प्रभावकारी नभएपछि नगरप्रमुख सरावगी काठमाडौं गए
प्रस, वीरगंज, १४ साउन/ कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिले साउन १० गते शनिवारदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्दै पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने र एक घर–एक व्यक्ति परीक्षण गर्ने निर्णय गरे पनि निषेधाज्ञाको भएको ५ दिन बितिसक्दा पनि पिसिआर परीक्षणले गति लिन सकेको छैन। पछिल्लो चरणमा वीरगंजमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्नुका साथै चार दिनमा ५ जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको र यो अवधिमा स्वाब नमूना सङ्कलन गर्ने लक्ष्य थियो। वीरगंज महानगरपालिकाले महानगरमा रहेका ३२ वटै वडाका ४० हजार घरधुरी र अनुमानित १० हजार थप गरी ५० हजार व्यक्तिको स्वाब नमूना सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर तीन सातादेखि यो अभियान सफल हुन सकेको छैन। निषेधाज्ञा जारी भएपछि आइतवारदेखि महानगरपालिकाले रेलवे माविबाट एक घर–एक व्यक्ति परीक्षण अभियान शुरू गरेको थियो। तर दैनिक १५ सय व्यक्तिको स्वाब नमूना सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा मुस्किलले १५० जनाको पनि स्वाब सङ्कलन भएन। महानगरपालिकाले रेलवे माविमा स्वाब सङ्कलन ग–यो भने कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिले माईस्थान मन्दिर अगाडि स्वाब
एकको मृत्यु, ३४ जना सङ्क्रमित थपिए
प्रस, वीरगंज, १४ साउन/ नारायणी अस्थायी कोभिड गण्डक अस्पतालमा बुधवार बिहान एकजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। वीरगंज–५ रेशमकोठी निवासी ६८ वर्षीय सङ्क्रमितको मृत्यु भएको अस्पतालका संयोजक डा उदयनारायण सिंहले बताए। सङ्क्रमित मुटुरोगी थिए, ५ दिनदेखि उनी गण्डक अस्पतालको आइसियूमा भर्ना भएको र आज बिहान पौने ११ बजे निधन भएको डा सिंहले बताए। अस्पतालको आइसियुमा अझै चारजना छन्। वीरगंजमा मङ्गलवार रातिको रिपोर्ट अनुसार १० महिला र २४ पुरुषसहित ३४ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। २७४ जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा ३४ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा मदन उपाध्यायका अनुसार ३४ जनामा २ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेर समूहका सङ्क्रमित रहेका छन्। जसमा ५ जना बालबालिका छन्। ३४ जनामा एकजना चिकित्सक, एकजना सेना, तीनजना प्रहरी, छजना वीरगंज कारागारका कैदीबन्दी–कर्मचारी, बाँकी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वयम् परीक्षण गराएकाहरू छन्। सङ्क्रमित हुनेहरू वीरगंजका रोशमकोठी, रानीघाट, आदर्शनगर, श्रीपुर, पावरहाउस चोक, मुर्ली, राधेमाई, भिस्वा, श्रीसिया, बेल्वा र
मृतक सङ्क्रमितको दाहसंस्कार वडाकै घाटमा गर्न दिने निर्णय
प्रस, परवानीपुर, १४ साउन/ वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको परवानीपुर बजार त्रिभुवन राजमार्गछेउ पर्सा–बारा जिल्लाको दोसाँधको बजार हो। बारा जिल्लाको परवानीपुर गाउँँपालिका वडा नं ३ र पर्सा जिल्लाको वीरगंज महानगर वडा नं २१ लिपनीबिर्ताको क्षेत्र हो, परवानीपुर बजार। पछिल्लो समय कोरोनाबाट मृत्यु भएका सङ्क्रमितहरूको शवको दाहसंस्कारलाई लिएर विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि बुधवार बिहान परवानीपुर बजार क्षेत्रको बारा र पर्साका दुर्ई वडाले वडास्तरीय संयुक्त बैठकले शव सद्गत गर्ने सहज वातावरण बनाउने निर्णय गरेको छ। वीरगंज–२१ लिपनीबिर्ताका अध्यक्ष हबिब मियाँ र परवानीपुर गापा–३ लिपनीमालका अध्यक्ष अनिल रामलगायत स्थानीयहरू भेलामा सहभागी थिए। उनीहरूले संयुक्तरूपमा आफ्नो वडाका कोही सङ्क्रमितको मृत्यु भएमा सम्बन्धित वडाकै श्मशानघाट (खोला किनारको श्मशान घाट वा मुस्लिमहरूको शव गाड्ने स्थान कब्रिस्तान)मैं शवलाई दाहसंस्कार गर्न नेपाली सेनालाई सघाउने निर्णय भएको परवानीपुरका नेपाली काङ्ग्रेस वडा एकाइ सभापति अनिल श्रीवास्तवले जानकारी गराए। उनले मानवीयता मर्न नदिन र पर्सा–बाराका अन्य स्थानीय प
अस्पताल डुलाउँदै बिरामीको मृत्यु, चार दिनमा पनि रिपोर्ट आएन
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १४ साउन/ वीरगंजमा एकजना ७० वर्षीय वृद्धको अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै समयमा सही उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ। वीरगंज–६ गहवाका एक वृद्धको बुधवार बिहान ३ बजे नेशनल मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा भएको परिवारजनले जनाएका छन्। समयमा पिसिआर रिपोर्ट तथा अस्पतालले विनापिसिआर रिपोर्टबेगर वृद्ध बुबाको उपचार तथा भर्ना गर्न नमानेको कारण उनको अवस्था बिग्रिंदै जाँदा उनको मृत्यु भएको निजका छोराले बताएका छन्। पहिलेदेखि उच्च रक्तचाप र थाइराइडका रोगी रहेकोमा झाडापखालाको समस्याले उनको अवस्था खराब हुन थालेपछि गत शुक्रवार राति १० बजे वीरगंज हेल्थकेयर अस्पतालमा लगिएको थियो। त्यहाँ आकस्मिक कक्षमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि लेखेर घर पठाइएको थियो। घर पठाउनुभन्दा पहिले आरडिटी नेगेटिभ आएको थियो। तर पिसिआर रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म वार्डमा भर्ना गर्न अस्पतालले नमानेपछि घरमैं लगेको राम्रो हुने भनेर पठाइएको थियो। त्यस रातमा पनि उनको अवस्था सामान्य बनेन। त्यसपछि उनलाई शनिवार बिहान १० बजे घरबाट तराई हस्पिटलमा लगियो। त्यहाँ पनि उनको अवस्था ठीक हुन सकेन। केहीबेर स्लाइन पानी चलाएर र रगतको परीक्षणप
शव तह लाउने ठाउँ भएन, चिकित्सक भन्छन्– “पर्सालाई खेलौना बनाइयो, राजीनामा दिने अवस्था छ”
राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १४ साउन/ तीन दिनअघि वीरगंज–२१ परवानीपुरकी १७ वर्षीया सङ्क्रमित किशोरीको शव नेपाली सेनाको टोलीले वीरगंज–३१ मिलनचोकनजीक भेडाहा खोलाको किनारमा सद्गत गर्न गयो। तर अवस्था असामान्य बन्यो, वरपरका करीब दुई हजार मानिस आएर नेपाली सेनालाई कोरोना सङ्क्रमितको शव सद्गत गर्न विरोध गरे। अन्त्यमा एउटा शर्तमा अन्तिम संस्कार गर्न दिए। शर्त थियो आइन्दा कुनै सङ्क्रमित शव उक्त स्थानमा सद्गत गर्न नल्याउने। भोलिपल्ट गण्डक कोभिड अस्पतालमा मृत्युवरण गरेका वीरगंजका ६५ वर्षीय वृद्धको शव दाहसंस्कार गर्न नेपाली सेनाले कुनै ठाउँ भेटेन। सोमवार साँझ ५ बजे नेपाली सेनाले सोही ठाउँमा शव सद्गत गर्ने तयारी थाल्यो। चण्डीप्रसाद गण वीरगंजका प्रमुख सेनानी मदनजङ्ग राणा आफैं जेसिबी लिएर भेडाहा खोलामा पुगे। गण्डक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ३० घण्टादेखि अलपत्र परेको शव, सेना र प्रहरीको सहकार्यमा व्यवस्थापन गरिएको शववाहनमा राखेर लगियो। गाउँलेले फेरि अवरोध सृजना गरे। प्रशासन तथा सेनाको योजना विफल भयो। सेनाले शव पुनः गण्डक अस्पताल पु–यायो। गण्डक कोभिड अस्पतालमा ड्युटीमा खटेका वरिष्ठ फिजिसियन डा नीरज स